Kismaayo News » Afka Soomaaliga oo boos ka cariirsaday afafka lagu isticmaalo aaladaha casriga ah
Afka Soomaaliga oo boos ka cariirsaday afafka lagu isticmaalo aaladaha casriga ah
Kn: Dalka Britain Afka Soomaaliga waxa uu ka mid noqdey dhowr iyo sodon luuqadood oo macluumaad xagga caafimaadka ah oo lagu turjumey lagu shubey taleefonada casriga ah ee Ipods iyo Ipads.
Macluumaadkani caafimaad ayaa loogu talogalay haweenka uurka leh, waxaana loogu talogalay in habkani cusub uu sahlo xiriir wanaagsan oo dhexmara dhaqtarka iyo haweeneyda oo inta badan aanan is aqoonin.
Urur Dhaqaatiirta xagga dhaliinka haweenka oo Britain ka jira oo marka magaciisa lasoo gaabiyo uu yahay OAA ayaa sheegey in turjubaanada goobaha caafimaadka ka shaqeeya ay yihiin kuwa qaali ah oo aanan la goyn karin, islamarkaasina aanan la helin markasta gaar ahaan marka xaalad degdeg ah oo fool ah ay timaado saqdhexe habeenkii iyo xiliyada fasaxyada.
Macluumaadkani ayaa waxa uu haweenka uurka leh ka caawinayaa in ay dhaqtarka u sheegeen habka ugu wanaagsan oo ay doonayaan in ay kaga gudbaan xanuunka, halka dhaqaatiirta ay iyagana haweenka ugu sharci karaan xaaladooda iyo waxa ay tahay in uu dhaqtarka sameeyo.
Macluumaadkani ayaa lagu shubey taleefoonada casriga ah ee Ipad iyo Ipod, waxaana la isticmaali karaa xitaa haddii uusan jirin qad internet ah.
Boqolkiiba 20% ka mid ah haweenka ku dhala dalka Britain ayaa ah kuwa kasoo jeeda dalal shisheeye, iyadoo marar badana ay timaado dhimasho iyo xaalado kale oo halis ah isfaham darro awgeed.
Qofkii doonaya in uu rogto macluumaadka caafimaadka haweenka dhalaya la xiriira waxa uu ka raadin karaa mareegtani www.oaaformothers.info. . Horey waxaa u jirey oo kaliya fariimo caafimaad oo Af Soomaali ku turjuman oo warqad ku daabacan oo lagu dhajiyey darbiyada goobaha caafimaadka ay Soomaalida isticmaasho meelo ka mid ah wadamada Galbeedka, waana markii ugu horeysey oo aalad casri ah loo isticmaalo Afka Soomaaliga.
Marka laga hadlayo Afka Soomaaliga iyo kaalinta uu ka galayo afafka aduunka ayaa waxaa jira dadaalo horey u socdey oo ahaa in barta wax lagu baaro ee Google loogu qorshe jirey in Afka Soomaaliga loo turjumo marka ay timaado xulashooyinka dadka ay samaynayaan marka ay timaado isticmaalka internet-ka.